TORITENY Alahady 18 Septambra 2016 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 18 Septambra 2016
Salamo 77,10-15 / Jaona 5, 10-16 / Kolosiana 1, 24-29
Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe “Ento ny fandrianao ka mandehana” Jaona 5, 11.
Fatra-panaja ny lalan’ny Sabata ny Jiosy nefa ity dia nandika izany. Rehefa nanontanian’ny lehibe izy ny amin’ny anton’izao fandikan-dalàana izao dia nambarany tsotra fa “Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe : Ento ny fandrianao ka mandehana”
Manasa anao hanaraka ny fampianarana raketin’ny tenin’Andriamanitra
1- Manambara ny asan’ny Tompo ny mino ka manandratra avo dia avo ny fahatsarany
Ny fanambarany izay asa lehibe nataon’ny Tompo taminy dia mariky ny fanandratany ny voninahitr’Ilay nanasitrana azy.
Hafatra : Betsaka ny famonjena asehon’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao, nefa maro koa ny sakana tsy ahafahanao mahatsapa izany, lalàna mifehy ny fiaraha monina, ny henatra, ny olana isan-karazany sns….
Sahia mijoro mandrakariva hanambara ny asa mahagaga nataon’Andriamanitra teo amin’ny fiainanao fa ireny no fanomezam-boninahitra andrasan’Andriamanitra aminao.
2- Mila manatanteraka an-kitsipo izay rehetra ambaran’ny Tompo amintsika isika
Na dia hita fa sarotra aza ny hahatanteraka izay nambaran’I Jesoa tamin’ity marary ity, dia nekeny ankitsipo izany, ary tanteraka taminy ny fanasitranana.
Hafatra : Taomina isika handinika sy hamantatra tsara izay teny hambaran’ny Tompo amintsika ka izay ambarany dia tanterahina amin-kitsipo. ENY dia ENY.
Ataovy ho filamatra ho anao ny fankatoavana sy fiainana ny tenin’Andriamanitra mba ho Kristiana modely ianao.
3- Mifaly amin’ny zavatra rehetra ho vavolombelon’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra
Fiainam-pifaliana miorina eo ambony fahoriana ny fianana Kristiana, ohatra, Rasalama Martiora ….. Na inona na inona mety ho tahotra na sakana dia tsy mampihemotra amin’ny fanoloran-tena mihitsy izany.
Hafatra : Manao ahoana ny fanoloran-tenanao eo anarehan’ireo sakana maro samihafa.
Manoloana ny fahasarotana iainan’ny Kristiana eto amin’izao tontolo izao, mety ho takona tsy ho hita intsony ny asa mahagaga nataon’Andriamanitra.
Mitaona ny mino toa ahy sy ianao ny Tompo mba hanambara ny asany. Aoka mba ho azo vakiana eo amin’ny fiainan’ny mino ny fahatsaran’Andriamanitra
RABEZANAHARY Jean Samuel, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 24 septembre 2016